Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ku weeraray Gobolka Sh/Hoose Gaadiid ay la socdeen wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya
Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ku weeraray Gobolka Sh/Hoose Gaadiid ay la socdeen wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Waxaa maanta lagu weeraray deegaano ka mid ah Gobolka Sh/Hoose Kolonyo gelbineysay wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowlada Somalia oo ka soo laabtey safar ay shalay ku tageen magaalada Marka ee gobolka Sh/hoose. Wasiiradaan oo kala ahaa wasiirka Gaashaandhiga C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi iyo wasiirka arrimaha gudaha C/kariin Xuseen Guuleed iyo saraakiil ciidan ayaa gaadiidkii gelbinayey waxaa wadada loogu galay inta u dhexeysa degaanada Buufow iyo Shalambood ee gobolka Sh/hoose.
C/qaadir Maxamuud Siidii Gudoomiyaha gobolka Sh/hoose ee dowlada Soomaaliya ayaa sheegay in Maleeshiyaad Al-shabaab ah oo si aad ah u hubaysan inay wadada u galeen wafdigii ka socday dowladda ee saaka ka soo ambabaxay magaalada Marka, kuna soo jeeday magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Wafdiga Wasiirada ay horkacayeen wadada loo galay markii ay marayeen inta u dhaxeysa degaanada Buufow iyo Shalambood, wuxuuna sheegay in gaari la socday Wafdigaasi ay ugu horayntii miino la kacday, iyadoo gaarigaasi ay ay la socdeen ilaalada Taliyaha Booliska Soamaaliyed Jen. Shariif Shiikhunaa Maye waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac, wuxuuna sheegay in halkaasi uu ka qarxay dagaal l fool ka fool ah oo 20 daqiiqo socday.
Sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu sheegay in ciidamada ilaalada u ahaa wafdigaasi ay si adag iskaga caabiyeen weerarkaas ayna khasaare balaaran u geysteen xoogagii soo weeraray, isagoo sheegay in haatan dagaalku uu qaboobay wasiiradii iyo saraakiishii dowladana ay bad qabaan, inkastoo sida uu sheegay uu khasaare kale jiro.
Dagaalkaasi ayaa la sheegay inn 10 askari oo ka tirsan ciidamada dowlada la xaqiijiyey inuu dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray weerarkaas oo noqonaya kii labaad ee wadada loogu galo wafdigaas ka socday dowladda Soomaaliya.